Onye guzobere Institute Alumni IndyGeneUS AI, Inc. Na-ebuli $1.5M Site na IsimoVest
Onye guzobere Institute Alumni IndyGeneUS AI, Inc. na-ebuli $1.5M sitere na IsimoVest
IndyGeneUS AI ji ntinye ego $1.5M meghere mkpụrụ ya gburugburu site n'aka ụlọ ọrụ isi obodo South Africa IsimoVest Venture Capital Partners na mgbakwunye na ego akọwapụtaghị nke sitere na onye na-etinye ego mmụọ ozi South Africa.
N'ịbụ nke dị na Cape Town, IsimoVest bụ ụlọ ọrụ isi ụlọ ọrụ Pan-African nke na-ahụ maka mmalite mmalite, ọrụ nkà na ụzụ dị elu nke nwere ike inye ngwọta ntinye ego nke ụlọ ọrụ na-enwe mmetụta dị ukwuu.
Dị ka ụlọ ọrụ ntinye ego na-akpachapụ anya, IsimoVest raara onwe ya nye n'ịkwado obodo ike maka akụ na ụba maka abamuru nke ndị Africa.
Iji mezuo nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ ga-akwado IndyGeneUS AI n'ịmepụta ihe nrụpụta usoro ya na Cape Town yana guzobe mmekọrịta dị mkpa mpaghara.
Tinye akwụkwọ maka Norrsken Impact Accelerator
Egypt EdTech Startup Orcas nwetara $2.1M
Fintech Float nke Ghana nwetara $17M
Ahịa mmalite Tawfeer ngwa ahịa n'ịntanetị na-echekwa ego mkpụrụ $500k
"Anyị ahụla IndyGeneUS AI site na nwata," Yongama Skweyiya, onye isi njikwa na IsimoVest kwuru.
"Mgbe mbụ ha sonyeere onye guzobere Institute South Africa Accelerator, anyị maara na ha bụ ụlọ ọrụ anyị chọrọ ilekwasị anya ... ha maara kpọmkwem ihe ahịa ahụ chọrọ yana otu ha ga-esi mezuo mkpa nke ahịa."
IndyGeneUS AI na-etolite usoro nyocha na njikwa data Multiomic nke nwere ike ịchọpụta usoro mbinye aka ọhụrụ dị ka biomarkers ma ọ bụ akara ihe egwu polygenic site na ijikọ data “omics”, data meta na ozi ederede dị ka data ndekọ ahụike eletrọnịkị.
"Ọ pụtara ihe dị ukwuu ịnweta ndị nkuzi ụlọ ọrụ ntọala anyị dị ka agba nke mbụ nke ndị na-etinye ego," Onye isi ụlọ ọrụ guzobere Institute na IndyGeneUS AI CEO, Yusuf Henriques kwuru.
"Ntụnye ego a na-enye anyị isi obodo anyị kwesịrị ibuga ngwá ọrụ usoro anyị na algọridim nke nwe ya iji wepụta nnukwu mkpụrụ ndụ ihe nketa ma melite njirimara nke ụdị mkpụrụ ndụ ihe nketa na-ebute ọrịa na ebumnuche ọgwụ ọhụrụ."
"Ụlọ ọrụ guzobere nwere obi ụtọ maka otu IndyGeneUS AI siri pụta na mmemme ngwa ngwa SA anyị nwere otu ọrụ iji gboo nsogbu dị mkpa nke ga-abara kọntinent Africa." kwuru
Chukwuemeka Fred Agbata, Regional Director of Founder Institute Africa. "Yusuf nọgidere na-elekwasị anya na mkpebi siri ike na ozi a, anyị nwere obi ụtọ ịkwado uto ya."
Ego ga-ekpuchi akụrụngwa na ụgwọ ọrụ iji wụnye nke mbụ NovaSeq 6000 ọgbọ ọzọ
usoro ikpo okwu na IndyGeneUS AI's flagship ọnọdụ, nke a ka ga-ekpebi.
Nkà na ụzụ a na-akpachapụ anya ga-enye ike n'usoro genome dum yana ihe ọhụrụ ndị ọzọ
teknụzụ iji gboo mkpa ndị na-eme nchọpụta na ndị na-ahụ maka ụlọọgwụ na-egbochaghị mkpa ka a na-anakwere ọgwụ ziri ezi ma mepụta usoro ọgwụgwọ mkpụrụ ndụ ezubere iche.
Foto egosipụtara: Yusuf Henriques IndyGeneUS AI, CEO
Na-eche nrụgide 'laghachi n'ụlọ akwụkwọ'? Nke a bụ ụzọ 5 teknụzụ nwere ike isi nyere aka
Urbantech entrepreneur? Tinye akwụkwọ maka ịma aka ọhụrụ ime obodo
Mmetụta nkwụsị nke Social Media na Economy Africa
Usoro teknụzụ kachasị maka ndị ọchụnta ego na 2022 [ICT Clinic]
Bulite na mmachibido iwu Twitter: Mgbanwe a ga-atụ anya na Economy Dijitalụ
Ọrụ nke Ụlọ Ọrụ Data maka mmepe Africa
Nyochaa: Ngwa kalenda iji kwalite ọrụ gị